ကိုကြီးမှ ညီမလေးသို့ ပေးစာ | သိလိုရာမေး
သမီးရည်းစား ဆက်ဆံရေး ကိုကြီးမှ ညီမလေးသို့ ပေးစာ
ဘာလိုလိုနဲ့ ညီမလေး ရန်ကုန်ကို ရောက်သွားတာ ၂ နှစ်လောက်တောင် ရှိသွားပြီနော်… အချိန်တွေကလဲ ကုန်မြန်လိုက်တာကွာ… ငါ့ညီမလေးကို ကိုကြီးကိုယ်တိုင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲကို လိုက်ပို့ခဲ့တာက မနေ့တနေ့ကလိုပဲ… ခုချိန်မှာ ကျောင်းတွေ တက္ကသိုလ်တွေလဲ လောလောဆယ် ပိတ်ထားတော့ ညီမလေးရဲ့အခြေအနေကို လှမ်းမေးရင်းနဲ့ အစ်ကိုကြီး တစ်ယောက်အနေနဲ့ မှာချင်တာလေးတွေ ရှိလို့ပါ ညီမလေးရေ…
ခုချိန်မှာ ကျောင်းတွေလဲ ပိတ်ထားတော့ အားလပ်ရက်တွေမှာ ဘာသာစကားလေ့လာတာတို့… ဒါမှမဟုတ် ညီမလေးစိတ်ဝင်စားတဲ့ စီးပွားရေးနဲ့ ပက်သက်တာတွေ လေ့လာတာတို့ အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်လေ…အရင်လို ကျောင်းမှန်မှန်တက်ပြီး ဘွဲ့ရဖို့ဆိုတာတော့ အရေးကြီးပေမယ့် ဘွဲ့ရသွားတာနဲ့ ပညာတတ်ဖြစ်မသွားဘူးဆိုတာ သိထားရမယ်… ဒီတော့ ညီမလေးရေ… ကိုယ့်ဘာကို ဝါသနာပါလဲ? ဘယ်အပိုင်းမှာ သူများတွေထက် ပိုအားသန်လဲ? ဆိုတာကို ရှာဖွေပါ… ဒါမှ နောင်တစ်ချိန် ဒီကပ်ဆိုးကြီးပြီးလို့ အရာအားလုံး ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သွားရင် ကိုယ့်အနာဂတ်အတွက် သေချာရေရာမှုရှိမယ့် တခြားအသိပညာတွေ သင်ကြားရာမှာ အထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မယ် ညီမလေး….
နောက်တစ်ချက်က ငါ့ညီမလေးက ၁၈နှစ်ကျော် ၁၉ နှစ်ထဲ ရောက်နေပြီဆိုပေမယ့် ဆယ်ကျော်သက်လေးဖြစ်တုန်းပါပဲ…လူငယ်ပီပီ အပေါင်းအသင်းနဲ့ ပျော်ချင်ပါးချင်တဲ့ စိတ်ရှိတာက သဘာဝပေမယ့် အပျော်ကနေ အပျက်ဖြစ်မသွားဖို့၊ သူများကြောင့် ကိုယ် လမ်းမှားမရောက်ဖို့ အရေးကြီးတယ် ညီမလေး… ပျော်သင့်သလောက်လဲ ပျော်ပါ… ဒါပေမယ့် အဲ့အပျော်နောက်မှာ အသိတရားလေးကပ်နိုင်ဖို့တော့ လိုလိမ့်မယ်… လောကကြီးမှာ သူလို ကိုယ်လို ဘာမှထူးမခြားနားတဲ့ သာမန်မိန်းမတွေ များတယ်… အဲ့တော့ အဲ့လို သာမန်မိန်းမမျိုးတွေထဲမှာ ညီမလေး မပါအောင် ကြိုးစားသင့်ရင် ကြိုးစားရမယ် ညီမလေး…
နောက်တစ်ခုက ညီမလေးအနေနဲ့ လူငယ်သဘာဝ စိတ်လှုပ်ရှားလို့ ရည်းစားသနာထားတာမျိုးကိုတော့ ကိုကြီး မကန့်ကွက်လိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နုနယ်သေးတဲ့အချိန်မှာ အချစ်ဆိုတာကို ရှေ့တန်းတင် ပုံအပ်မိတဲ့ လူငယ်တိုင်းရဲ့ ရှေ့ခရီးလမ်းတိုင်းက မဖြောင့်ဖြူးတတ်ဘူး ဆိုတာ ကိုကြီးပြောချင်တယ်… မိန်းကလေးတွေရဲ့ ထိလွယ်၊ ရှလွယ်၊ စိတ်ခံစားလွယ်တဲ့ အချက်ကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး မတရားဇာတ်ခင်းချင်တဲ့ ယောကျာ်းတွေကလဲ တစ်ပုံကြီးဆိုတော့ ယောကျာ်းတိုင်းကိုတော့ အယုံမလွယ်လိုက်ပါနဲ့ ညီမလေးရေ… ပြီးတော့ ထပ်သိထားရမှာက ယောကျာ်းကောင်းတွေက ညီမလေးရဲ့ သူတို့အပေါ်ထားတဲ့ အချစ်ကို ခုတင်ပေါ်မှာ သက်သေမပြခိုင်းတတ်ဘူး ညီမလေး…
ကဲ…. ‌ကိုကြီး ပြောချင်တာတွေလဲ စုံသလောက်ရှိပြီ… အစက ကိုကြီးရော ဖေဖေနဲ့ မေမေရော က ရန်ကုန်ရောက်နေတဲ့ ညီမလေး ကိုဗစ်ကြောင့် နယ်လဲ ပြန်လာလို့မရဆိုတော့ စိတ်ပူနေကြတာ… ခုတော့ ဒီအခြေအနေကို လူတိုင်းက အသားကျနေပြီဆိုတာက တကြောင်း၊ ညီမလေးနဲ့တူတူ အန်တီဝေလဲ ရှိနေတာက တကြောင်းဆိုတော့ စိတ်မပူတော့ပါဘူး… ဒါပေမယ့် ရောဂါကူးစက်မခံရအောင်လို့တော့ အပြင်ထွက်တိုင်း နှာခေါင်းစည်းတပ်၊ လက်ဆေး၊ လူစုလူဝေးရှောင်ပါ ညီမလေးရေ…